ပဒသော – Page2– News and Media Sharing
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးလိင်ပြောင်းအမျိုးသမီးအဖြစ်မှ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားပြီဖြစ်တဲ့ မျိုးကိုကိုစန်း
မျိုးကိုကိုစန်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး Transgender တစ်ယောက်ပါ။ ပရိသတ်တွေ အထူးသဖြင့် အမျိုးသား ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ အရမ်းကို နာမည်ကြီးပါတယ်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာ မျက်နှာလေး၊ချစ်စရာ အမူအယာ လေး တွေ ကြောင့် ကြွေနေကြတာပါ။ သူမရဲ့ comment မှာဆိုရင် မျိုးကိုကိုစန်းရဲ့ အလှမှာ ဘယ်လိုကြွေကြောင်း၊ချစ် ကြောင်း ရေးထားတဲ့
ဘာတော်လည်တော့ မသိဘူးဆိုပြီး တိုင်ရွန်ကို အောက်ဖဲလှန်လိုက်ပြန်တဲ့ ဟန်ငြိမ်းဦး…
မင်းသားချော တိုင်ရွန်ကတော့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာပေမယ့် လက်ရှိမှာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသားတစ်လက်အနေနဲ့ပါ အောင်မြင်မှုအခိုင်အမာရရှိထားပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ မကြားသေးမှီက ကိုယုန်လေး mtv နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မှတ်ချက်ပေးခဲ့ရာမှ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံနေရတဲ့ တိုင်ရွန်ကိုတော့ ဆယ်လီတွေရဲ့ သတင်းတွေကို အမြဲဖော်ကောင်လုပ်နေတဲ့ ဟန်ငြိမ်းဦးက အောက်ဖဲထပ်လှန်လိုက်ပြန်ပြီနော်…ဘာတော်လည်းတော့မသိ🤔 Hotelမှာရိုက်ထားတာပဲ ဆိုပြီး
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်‌ကျော် ၂၀၁၁ တဝိုက်မှာ ရှိုင်းမင်းအောင် ၊ဂျူလှိုင်ထွန်း နဲ့ ရဲထွေးတို့ လူငယ်တွေ ပူးပေါင်းပြီး မေမြို့သူ ဆိုတဲ့ Mp-3 အယ်ဘမ် တခုကို ထုတ်ခဲ့ကြတယ် ။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ပါးစပ် မှာ စွဲနေရစ်တဲ့ ” မအတွက်” ဆိုတဲ့ သီးချင်းတပုဒ်ဟာလဲ မေမြို့သူ အယ်ဘမ်ထဲက
အလှူရှင်တစ်ဦးကြောင့် မျက်ရည်ဝဲခဲ့ရတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ…
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်သလို နှလုံးသားလှတဲ့သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတဂေဟာကိုတည်ထောင်ထားပြီး မေတ္တာအပြည့်နဲ့ကလေးတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့သူတစ်ဦးပါ။ ဒီပရဟိတဂေဟာကို အလှူရှင်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုလာရောက်လှူဒါန်းကြပြီးထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေလည်း ရှိတတ်တာပါ။ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “ဒီနေ့ ကျမရဲ့ ဂေဟာကို လာလှူရလို့ ဝမ်းသာမျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ အလှူရှင် တစ်ဦး ကြောင့် ကျမ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု ခေါ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်…အဝတ်လျော်လုပ်ငန်း လုပ်ပြီး တနေ့ကို ဝင်ငွေ ငါးထောင်ရှိရင်
မြန်မာနိုင်ငံကို စော်ကားသလိုပဲဗျာ သေဒဏ်ပေးလိုက်ရမှာ
​ထောင်ဒဏ် (၃၂)နှစ် ချလိုက်ပါတယ် …မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်……..မြဝတီတစ်မြို့လုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အထူးသတင်းလေးပါမြဝတီခရိုင်တရားရုံးမှတရားခံ(၂)ဦးအပေါ် အောက်ပါအတိုင်း အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်……တရုတ်နိုင်ငံသားWANG WEIWEI အသက်(၂၈)နှစ်နှင့် မြန်မာစကားပြန် သန့်ဇင်ဝင်း(၄၀)နှစ်တို့ ၂ ဦးအပေါ်ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ၃၆၃ အတွက်ထောင်ဒဏ်(၅)နှစ် ၃၆၆ အတွက်ထောင်ဒဏ်(၇)နှစ် ၃၇၆ အတွက် ထောင်ဒဏ်(၂၀)နှစ်စုစုပေါင်းတရားခံ(၂)ဦးအပေါ် ထောင်ဒဏ် ၃၂ နှစ်အမိန့်ချခဲ့တယ်……မူခင်းအကျင်းဖြစ်ပွားပုံမှာမြဝတီမြို့၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊အောက်ချိုင့်အနီးနေထိုင်သူ တရားလိုဒေါ်……….မှ ၈.၃.၂၀၁၉ ရက်နေ့ ည ၂၃:၃၀အချိန်တွင်သမီးဖြစ်သူ မ……….
မပုပ်မသိုးပဲ ယနေ့ အချိန်အထိရှိနေသော ကျိုက်ထီးဆောင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး…(လိုရာဆုတောင်းပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…)
မပုပ်မသိုးပဲ ယနေ့ အချိန်အထိရှိနေသော ကျေးဇူးတော်ရှင် ကျိုက်ထီးဆောင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရုပ်ကလပ်ဖြစ်ပါတယ် …. သင်ယနေ့ကံကောင်းချင်ရင် ရှယ်ပါ လိုက်လုပ်ပါ ဒီ အချက်တွေလိုက်နာနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ သင့်အတွက် ငွေကြေး လာဘ်လာဘကံပွင့်ဖို့ မဝေးတော့ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါပြီ။ အလုပ်မရှိပဲနှင့်တော့ ငွေကြေးများများ လိုချင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်ရဲ့ပိတ်ဆိုနေတဲ့ ငွေကြေးကံများ ရသင့်လျှက်ကြန့်ကြာနေသော ငွေကြေး လာဘ်လာဘများအပြင်အခြားသော နေရာများမှလည်း ကိုယ့်ရဲ့ကံ